Unqulo & Umoya I-Crystal Therapy
Amagqabha angamaqheno engokwemvelo yoMama kunye novuyo lokunika nokufumana. Ngokunikezela umntu ngekristal, unika nokuphilisa. Kukho amaninzi eentlobo ezahlukeneyo zamatye ukuba ukhethe kuzo, kwaye uhlolisise kwaye ufumanisa ilitye eliqaqambileyo kuwe unokuzonwabisa.
Amatye alandelayo alandelayo kufuneka ahlasele i-poulet yakho yokuphulukisa okanye ubonise kwisibingelelo sakho se- crystal . Kufuneka udibanise nawaphi na amatye ovakalelwa kukukhangela ; Ukuxhatshazwa kwengqondo kukuphawu lokuba ezi zigugu zinamandla okuphulukisa okhethekileyo. Qinisekisa ukuba uhlambulule iimpawu zamagama njengoko uzifumanayo, kunye nokuhlambulula ngokuqhelekileyo abo sele besele kwiqoqo lakho.
Ngombane walo omnene, i- quartz iphakama ngamanye amaxesha ibizwa ngokuba ilitye elinothando kuba livula umntu onxibayo ukuba amthande kuzo zonke iindidi: i-platonic, ngokwesondo kunye nangokomoya. Ingumphilisa wezifo zentliziyo kunye neentlungu zentliziyo . I-quartz yaseRose isipho esifike ngexesha ukunikela umntu ofuna ukuzithanda okanye ufuna ukufumana uxolo lwangaphakathi.
I-Fluorite ivela ngemibala eyahlukeneyo kwaye iyaziwa njengelitye lokukhusela ngenxa yokukwazi ukukhusela amandla angendawo, ngakumbi kwabanye abantu. I-Fluorite inokukunceda umntu onxibayo athole uxolo ngokomoya kwaye anokunceda ekucamngeni. Coca i-fluorite yakho ubuncinane kanye ngeveki xa uyisebenzisa njengoncedisayo.
Kuthiwa iLapis lazuli ukuvula iimfihlakalo ngokuncedisa umgcini okanye umphathisi-nto ukuphelisa ukudideka kunye nokukhuseleka kwengqondo. I-Lapis nayo icingelwa ukuba iyigumbi eliyigugu elidibana neendawo eziphathekayo kunye nezisezulwini, ukutyhila iimpawu zezulu kunye nalabo abafuna amandla okuphilisa.
I-Hematite iyitye elisezantsi. Esi sitye samatye esenziwe nge siliva sisoloko sisetyenziselwa njengesixhobo esisisiseko sokunceda abo bathambekele ekukhuseleni imisebenzi yehlabathi okanye iziganeko ngokungahambi komzimba . Ukuba uya kuba yimeko exinzelelekileyo, njengomngcwabo okanye udliwano-ndlebe lomsebenzi, zama ukuhlutha isahlulo se-hematite ephaketheni lakho. Uyakuziva ukhululekile njengoko eli galelo lisasaza amandla alo okuphulukisa.
UJade uhamba ngamandla kunye nokugulisa amandla, ukunceda umntu athole ukuzwamkela nokuzinza kwangaphakathi. Le ilitye lokuphulukisa linokunceda umntu onxibayo ukuba aqonde isimboli sephupha aze athande ubugcisa obuphakathi. Ingakwazi kwakhona ukukhulula intlungu engokwenyama, njengengqungquthela kunye nokuncedisa i-toxins emzimbeni.
I-Amethyst ineempawu zokuphilisa ezinamandla, zombini nangokomoya. Le ngxondorha inika umqondo wokuzola kunye nokulinganisela, ukucima ingqondo yokudideka kunye neengxaki eziphazamisayo okanye ezixinzelelekileyo. Ingakwazi ukulinganisela ama-hormone amanqanaba nokuqinisa umzimba womzimba.
Kukho ixesha elide lihlonishwa njengelitye lokuphulukisa ngabantu baseMelika basezantsi-ntshona ye-US, abaxabisa ngayo amandla abo okuncedisa ukutolika amaphupha, ukugwema ububi, nokuqinisa uthando kunye nobuhlobo bobudlelwane. Ukugqoka i-turquoise kunokwenza umntu abe nesibindi sokuzithemba kuluntu kwaye anike ubulumko.
I-Kyanite inceda ekuncediseni ukuhanjiswa kunye nokuvula amaziko oonxibelelwano ukwenzela ukunxibelelana kunye nezikhokelo zomoya kunye neengelosi. I-Kyanite mhlawumbi iyaziwa kakhulu ngeendawo zayo zokulinganisela ezilungelelanisa i-chakras, ingakumbi umkhwa we-throra. Akukho sidingo sokuhlambulula eli litye; iyakucacisa ngokuzenzekelayo ngamandla angalunganga.
Zonke iintlobo ze-obsidian zingasetyenziselwa njengezakhiwo kunye nezikhusela. I-obsidian yeqhankqalazi ikhephu inceda abantu ukuba banikezele okanye bavumeleke ukuba bahambe ngemikhwa emibi okanye iindlela ezidlulileyo ezingaba zikhonza imeko yazo yangoku. Inokuzisa ithuba lokutshintsha, ukuthula, nokucaca.
I-Citrin ilitye elihle eliphuzi ukuthwala ngoba linceda ukubonakalisa iinjongo zakho . Le kristal enamandla igcina igcinwe isandi sayo ngenxa yokuba igcwele ukunika amandla amandla elanga. I-Citrin iyakrhola ubuninzi kunye namandla abo, njengokuba i-topaz eluphuzi yenzayo.
Iimpahla Zokomoya NezoPhilisa ZoThuthi
Impahla Yokomoya kunye nePhiliso yeCitrin